Jehovha anoda vanhu vake (1-5)
Vapristi vanopa zvibayiro zvisina kunaka (6-14)
Zita raMwari richava guru pakati pemarudzi (11)
1 Shoko rinokosha: Iri ndiro shoko raJehovha kuna Israeri, raakataura achishandisa Maraki:* 2 “Ndakakuratidzai rudo,”+ anodaro Jehovha. Asi imi munoti: “Makatiratidza rudo sei?” “Isau akanga asiri mukoma waJakobho here?”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Asi ndakada Jakobho, 3 ndikavenga Isau;+ uye ndakaita kuti makomo ake asare asina chinhu,+ ndikaita kuti nhaka yake isare ichigarwa nehunguhwe* dzemurenje.”+ 4 “Kunyange zvazvo Edhomu achiti, ‘Takaparadzwa, asi tichadzoka tovaka nzvimbo dzakaparadzwa,’ zvanzi naJehovha wemauto, ‘Vachavaka, asi ini ndichaputsa, uye vanhu vachavatumidza kuti, “nharaunda yezvakaipa” uye “vanhu vakatukwa naJehovha nekusingaperi.”+ 5 Maziso enyu achazviona, uye muchati: “Jehovha ngaakudzwe munharaunda yeIsraeri.”’” 6 “‘Mwanakomana anokudza baba vake;+ uye muranda anokudza tenzi wake. Saka kana ndiri baba,+ sei ndisiri kukudzwa sezvandinofanira kuitwa?+ Kana ndiri tenzi, sei ndisiri kutyiwa* sezvandinofanira kuitwa?’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto kwamuri imi vapristi vanozvidza zita rangu.+ “‘Asi imi munoti: “Takazvidza zita renyu sei?”’ 7 “‘Nekupa zvekudya zvakasvibiswa* paatari yangu.’ “‘Uye munoti: “Takakusvibisai sei?”’ “‘Nekutaura kwenyu kuti: “Tafura yaJehovha+ chinhu chinozvidzwa.” 8 Pamunopa chibayiro chemhuka yakapofumara munoti: “Hazvina kuipa.” Uye pamunopa mhuka yakaremara kana inorwara munoti: “Hazvina kuipa.”’”+ “Chimboedzai kupa gavhuna wenyu mhuka dzakadaro. Angakufarirai here, kana kuti angakugamuchirai zvakanaka here?” anodaro Jehovha wemauto. 9 “Zvino ndapota, kumbirai Mwari kuti atinzwire nyasha. Kana imi muchipa mipiro yakadaro, angakunzwirai nyasha here?” anodaro Jehovha wemauto. 10 “Ndiani pakati penyu anoda kuvhara masuo?*+ Nekuti munotoda kubhadharwa kuti mubatidze moto paatari yangu.+ Handifadzwi nemi,” anodaro Jehovha wemauto, “uye handifariri mipiro yamunopa.”+ 11 “Nekuti zita rangu richava guru pakati pemarudzi kubvira kumabvazuva kusvika kumavirira.+ Utsi hwezvibayiro huchapfungaidzwa munzvimbo dzese uye zita rangu richaunzirwa mipiro sechipo chakachena; nekuti zita rangu richava guru pakati pemarudzi,”+ anodaro Jehovha wemauto. 12 “Asi imi muri kurisvibisa*+ muchiti, ‘Tafura yaJehovha yakasviba, uye mipiro inoiswa pairi nezvekudya zviri pairi zvinhu zvinozvidzwa.’+ 13 Munotiwo, ‘Chokwadi izvi zvinonetesa!’ uye munozvifembedza muchizvishora,” anodaro Jehovha wemauto. “Uye munounza mhuka dzakabiwa, nedzakaremara, nedzinorwara. Munotouya kuzopa zvinhu zvakadaro! Ndingazvigamuchira here?”+ anodaro Jehovha. 14 “Munhu ane unyengeri ngaatukwe; anopika uye anopa chibayiro chisina kunaka* kuna Jehovha asi pazvipfuwo zvake paine mhuka hono yakanaka. Nekuti ndiri Mambo mukuru,”+ anodaro Jehovha wemauto, “uye zita rangu richatyiwa pakati pemarudzi.”+
^ Kureva kuti “Nhume Yangu.”
^ Kana kuti “kuremekedzwa.”
^ ChiHeb., “chingwa chakasvibiswa.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva basa rekuvhara masuo etemberi.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kundisvibisa.”
^ Kana kuti “chakaremara.”